Trusty Shops|Swisse Hair Nutrition For Men & Women ဆံပင္သန္ေဆး
Swisse Hair Nutrition For Men & Women ဆံပင္သန္ေဆး
Product Code: OZ0085
ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံပင်အတွက် ကူညီပေးပြီး ဆံပင်ကို သန်စေသည်။
ChooseFor Men （60 Capsules）For Women （60 Capsules）
Swisse ရဲ့ ဆံပင်သန်ဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းရှိ ဆဲလ်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် ဆံပင်သန်စေခြင်း၊ ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ခြငး်ရှိပါသည်။ Iron ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆံသားကို လှပစေသည်။ Biotin ကတော့ ဆံပင်ကျိုးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ Keratin ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆံပင်ဖွဲ့စည်းပုံ စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ပြီး တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ စပျစ်စေ့၊ ဗီတာမင် E၊ Zinc, Selenium and Vitamin B12 ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆံပင်သန်ဆေး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင် Vitamin A သောက်သုံးလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့်သာ ရှေးဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးပြုပုံ - တနေ့ (၂)လုံး အစာစားနေချိန် သို့ အစားစားပြီး သို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Australian Olympic အဖွဲ့ရွေးချယ်အသုံးပြုသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ The Choice of the Australian Olympic team
Swisse ကုမ္ပဏီသည် 1969 ခုနှစ်တွင် Australia Melbourne မြို့၌တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Australia သဘာဝကုသနည်း၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းညွန်သူတစ်ပါးဖြစ်သည်။ “သိပ္ပံနည်းပညာဖြင့်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေပြီး ထိရောက်စွာစျေးကွက်ကိုဦးဆောင်မည်”ဟူသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော Swisse ဖော်မြူလာသုသေတနစမ်းသပ်ချက်များတွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေ ခြင်းကို အဓိကထားပြီးလုပ်ဆောင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခြင်းမှစ၍ ကုန်ချောထုတ်လုပ်သည်အထိ အရည်အသွေးစမ်းသပ်သည့်စနစ်ပေါင်း (၃၀၀)ကျော်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့အသိအမှတ်ပြု၍ လုံခြုံစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်သည်။ Swisse တံဆိပ်သည် Australia ၌ နာမည်ကြီးပြီး အကောင်းဆုံးဗီတာမင်အားဆေးဖြစ်သည်။ Australia ဆေးဝါးကြီးကြပ်ဦးစီးဌာန၏ထိန်းချုပ်မှုကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်သည်။
You're reviewing: Swisse Hair Nutrition For Men & Women ဆံပင္သန္ေဆး
Healthy Care African Mang ...
Healthy Care African Mango Seed Extract
weight loss စျေးကွက်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အာဖရိကသရက်သီးဟာ Hollywood Stars တွေတောင် လက်ခံသုံးစွဲနေကြပါတယ်။
Red Seal - Raspberry Leaf ...
Red Seal - Raspberry Leaf tea
အမျိုးသမီးများ သားအိမ်ကျန်းမာဖို့ အဓိကကူညီပေးပြီး ရာသီလာချိန်တွင် ခံစားဝေဒနာကိုလည်း အထူးကူညီပေးပါတယ်။
Choose20 teabags- 35g
အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှာ မူလ အလှတရားပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အထူးကူညီပေးပါတယ်။
Nature's own Korean Ginse ...
Nature's own Korean Ginseng 500mg
တနေကုန်အလုပ်ထဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချပြီး ခံနိုင်ရည်တိုးပွားစေသည်။
Nu-Lax Natural Fruit Laxa ...
ဝမ်းချပ်ခြင်းအတွက် သဘာဝအသီးအနှံမှ ပြုလုပ်တဲ့ Natural Fruit ဝမ်းပျော့ဆေး
Menevit for Male Fertilit ...
Menevit for Male Fertility
အမျိုးသားများသည် ပုံမှန်ကျန်းမာသော အနေအထိုင် အလေ့အကျင့်ဖြင့် နေသွားခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၏sperm ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းဖွ့့ံဖြိုးစေပါသည်။
Blackmores CoQ10 နှလုံးသွ ...
Blackmores CoQ10 နှလုံးသွေးကြော အာဟာရ အားဆေး
နှလုံးကာကွယ်ပေးပြီး နှလုံးကြွက်သား တစ်သျှုး tissue များကို အားဖြည့်ပေးသည်။
Blackmores Fish Oil Mini ...
Blackmores Fish Oil Mini Caps (Odourless)
Panadol Rapid for Adult2...
13,000 MMK ~ 32,000 MMK
Panadol Rapid for Adult 20,40,80
အဖျားအမြန်ဆုံးကျစေပြီး နာကျင်မှုများကိုသက်သာစေသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းများအတွက် လည်း သုံးစွဲနိုင်သည်။
Choose20 Caplets40 Caplets80 Caplets
Mysekyo Joint & Bone
အသက်ကြီးသူများတွင် ဖြစ်လေ့့ဖြစ်ထရှိသော အရိုးပွရောဂါ၊ အရိုးအဆစ်များ ရောင်ခြင်း၊ နာခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
Mysekyo Livertonic with V ...
Mysekyo Livertonic with Vitamins
Mysekyo Krill Oil + Fish ...
Mysekyo Krill Oil + Fish Oil
မျက်လုံး၊ ဦးနှောက်၊ နှလုံးနှင့် အဆစ်အမြစ် အားဆေး။
Mysekyo CoQ10 Health & En ...
Mysekyo CoQ10 Health & Energy
နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးသွေးကြောများကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
NOOR VITAMINS ENERGY+
Blackmores Pregnancy & Br ...
Blackmores Pregnancy & Breast-Feeding Gold အားေဆး
နို့တိုက်နေသော မိခင်များကို နို့များများ ထွက်စေသည်။ သန္ဓေသား မွေးဖွားချို့ယွင်းမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
Healthy Care Propolis (ပ် ...
Healthy Care Propolis (ပ်ားရည္ေဆးလုံး)
Choose200 Soft Capsules
Phylologic Anthogenol Fra ...
Phylologic Anthogenol France
နှလုံးကို ကျန်းမာစေပြီး မလိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် အသားအရေကို ပိုမို ကြည်လင်စေပြီး အရေပြားပို၍ ဝင်းလာစေပါတယ်။
Blackmores Natural E 1000 ...
သင့်နှလုံးကျန်းမာဖို့ ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါ။
အရွယ်နှင့်မလိုက် လှပနုပျိုစေပြီး အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းကို အထူးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ ခံတွင်းကျန်းမာဖို့နှင့် သားအိမ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်းကျန်းမာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Oral Probiotic ဖြစ်ပါတယ်။